#कथा Archives - Left Review Online
क. त्रिलोचन ढकाल २०७७ साउन ३ गते शनिवार
"चार महिना भयो भोकै छु ?" "भोकले मेरो पनि बेहाल छ ?" "म पनि भोकै छु । खाना कसैले पनि ल्याइदिएन ?" तीन जना भगवानको पीडाको आवाज हो यो । भोकको समस्याको खोजी गर्न र समस्या समाधान गर्न भनेर अयोध्यामा भगवानहरूको महासम्मेलन आयोजना भयो । महासम्मेलनमा गहिरो विचार...बाँकी
#अयोध्या#कथा#कोरोना भाइरस#त्रिलोचन ढकाल#भगवान#महासम्मेलन
क. दाताराम खनाल २०७४ माघ २४ गते बुधवार
मेराे सात वर्षे छोरो । जाे कक्षामा सँधै अब्बल दर्जामा उत्तीर्ण हुने गर्दथ्यो । यसपालि पनि उपल्लो कक्षामा भर्ना हुन पायो । हिजो मात्रै तलब आएको, मैले उसलाई नयाँ स्कुल पाेशाक अनि जुत्ता किन्न बजार लिएर गएँ । "पोहोरकै जुत्ता मर्मत गरेर लगाउँदा एक वर्ष भइहाल्छ नि ?"...बाँकी
#Brother of Jhala Nath Khanal#DR Khanal#Story#The Gift of Honesty#इमान्दारिता#कथा#दाताराम खनाल#पुरस्कार